Shina: Mpiasam-Bahoaka Namono Tena Rera-tsaina Ve Sa Norerahan-tsaina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2011 3:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, 日本語, English
Araka ny fanadihadiana nataon'ny manampahefana sinoa dia toa hoe mihabetsaka ireo mponina Sinoa no tratran'ny aretin-tsaina amam-panahy. Malaza moa fa rehefa nozahana dia marary saina amin'ny karazan'aretina toy ny Fikorontanana Vokatry ny Fifikirana Tafahoatra izay olon-tsotra manao fanangonan-tsonia manohitra ny tsy rariny sy ny kolikoly manjaka eo amin'ny firenena. Vao tsy ela koa izay dia nisy koa ny fizahana natao ka hita fa noho ny harerahan-tsaina amam-panahy no nahatonga ireo mpiasam-bahoaka sy mpikambana ao amin'ny governemanta namono tena.
Amin'ny ankamaroan'ireo tranga famonoan-tena, ny faharerahan-tsaina amam-panahy no noraisina haingana ao anatin'ny iray andro na roa tsy mila fanazavana be ho antony. Rehefa Sanganehana manoloana ny fanadihadiana navoakan'ny polisy ny mpiserasera sinoa, dia mampiasa ny matoateny iharana fotsiny hoe “norerahan-tsaina”, mba hanasongadinana fa misy voarohirohy amin'ny resaka kolikoly ao.
Trangana olona “noharerahana” vao haingana ohatra ny polisy manamboninahitra misahana ny fanadihadiana heloka bevava no namono tena tamin'ny 12 Novambra 2011 tao Zhejiang . Tsy ampy telo andro taty aoriana, tamin'ny 2:55 hariva, 15 Novembra 2011. Namoaka sombiny [zh] tamin'ny valin'ny fanadihadiana ao amin'ny kaontiny Weibo ny Polisy sinoa mpikirakira Web:
Polisy Sinoa mpikirakira Web: [nandevozin'ny asany tanteraka ka nampijalian'ny faharerahan-tsaina amam-panahy ilay polisy manam-boninahitra misahana ny heloka bevava ao Zhejiang ilay namono tena tamin'ny fitsambikinana avy any amin'ny trano ambony rihana ] Nanambara ny polisy fa tamin'ny 11:30 sasany tamin'ny 12 Novambra 2011, dia nahazo tatitra avy amin'ny polisy ao Zhejiang Shengzhou ry zareo fa nisy olona nitsambikina avy eny ambonin'ny trano iray. Nentina haingana teny amin'ny hopitaly izy kanefa tsy tàna intsony ny ainy. Fantatra fa i Xu Dong ity olona ity, polisy manam-boninahitra misahana ny heloka bevava ao an-tanànan’ Shengzhou. http://t.cn/S2zNMV
Ity ambany manaraky ity ny adihevitra taorian'ny fivoahan'ny lahatsoratra:
唐僧包二奶00：Ireo polisy manam-boninahitra izay mbola manam-panahy ihany no mitady ho tratran'ny faharerahan-tsaina.
王惜梧：Mampijaly ny asan'ny polisy manamboninahitra ao Shina!! Tsy azo ivalozana ny mety tsy ahazoan'izy ireo ny mpanao ratsy fa mety ny tsy meloka indray no voasambotra ( tsy fanahy iniana ). Raha tsy esorinao ny konsiansinao, dia mety ho tratran'ny faharerahan-tsaina ianao. Kanefa tsy ho fantatrao mihitsy raha faharerahana tena izy na tsia izany tranga izany
飞天媚娘：Ireo rehetra izay mitsambikina avy any ambonin'ny trano dia tratran'ny faharerahan-tsaina sy ara-batana, ireo rehetra izay manao fahadisoana amin'ny asa dia mpiasa tsy maharitra.
Tranga hafa koa no niseho tamin'ny 10 Novembra 2011 tamin'ny 7ora hariva, Lu Yongjun, Tale lefitra ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Faribohitra, eo ambanin'ny fitantanan'ny Minisiteran'ny Fambolena no nitsambikina tamin'ny varavarankely ao amin'ny biraony. Ny ampitso tamin'ny 10 ora maraina, nandritra ny fivoriana tao amin'ny Minisiteran’ ny Fambolena no nahafantarana sahady fa tratry ny aretin'ny faharerahan-tsaina amam-panahy i Lu ary nangataka ireo lehiben'ny Minisitera fa tsy misy intsony fanazavana hafa fanampiny mikasika ny zava-niseho. Niahiahy ny zava-nitranga ny mpiara miasa amin'i Lu satria fantatra fa vao 57 taona monja izy kanefa toa nalefa misotro ronono sahady. Nalevina tamin'ny 14 Novambra 2011 teo ny nofo mangatsiakany. Ao amin'ny fampahalalam-baovao ao Shina Weibo, mpiserasera marobe no maneho hevitra mikasika ny fanadihadiana natao:
好咪咪：Tsy mampino izany hoe mpiasa-panjakana ambony tahaka izao no mijaly ny aretin'ny faharerahan-tsaina amam-panahy ka mamono tena. Kisendrasendra ihany, toa tahaka ny nifanaraka mialoha ve izany izy ireo [ny amin'ny famonoan-tena miaraka].
MOMAX：Manao sorona ny tenany ary mamonjy ny ekipa rehetra. Raha misy iray namoy ny ainy, maro ireo voavonjy ary voakarakara tsara ny fianakaviany. Raha tsy izany, mino koa ny sasany fa mety hijaly ny fianakaviany raha maty izy.
游虾甲V5：Tsy afaka mamoaka ny tsiambaratelon'ny firenena.
央企鞍钢总医院张国贤: Tia mitsambikina avy any ambonin'ny trano ny manam-pahefana lehibe indrindra, mankafy ny faharerahan-tsaina amam-panahy sy ny famonoan-tena. Tia manao ny sorona ny tenany, mananton-tena, sy mihantona eny amin'ny rindrina ny sarambabem-bahoaka, . Sahirana mangalatra ny vata mangatsiakan'izy ireny ny manam-pahefana ary mandevina azy ireny.
饶春亮：mikatona ny fanadihadiana amin'ny fahafatesan'ny olona iray. Tsy fanomezana hasina ny olona ny tsy fijerena ny mombamomba ny maty…
Nitombo ny ahiahin'ny olona manoloana ny fanadihadiana momba ireo mpikambana governemanta sy ny mpiasa-panjakana namono tena, nanomboka tamin'ilay fahafatesana mampiahiahy nahazo ilay manamboninahitra misahana ny fanoherana ny kolikoly, Xie Yexin tao Hebei, tamin'ny volana Aogositra 2011. Araka ny voalazan'ny valin'ny fandidiam-paty natao, novelesina in-11 i Xie, teo amin'ny tratrany, ny tendany, ny kibony sy ny tanany roa, ary namoy ny ainy avy eo noho ny fahatapahan'ny lalan-drà teo akaikin'ny fony. Ny polisy kosa nilaza fa famonoan-tena no niseho izay lavin'ny fianakavian'i Xie. Vaovao fanampiny ao amin'ny WSJ.